Sidee loo sameeyaa Qoraallada quruxda badan iyo qaababka fayadhowrka ee goobahaaga?
Home » Рекомендовані статті
09.05.2020 Category: Рекомендовані статті
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray phiên bản tan iyo 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii. gudaha /home/218053.cloudwaysapps.com/wmdtwanpyt/public_html/wp-includes/fiances.php Trực tuyến 4713
Haddii Internetku yahay hal shay, waa muuqaal.
Dadku waxay jecel yihiin si dhakhso ah oo sahlan oo loo heli karo macluumaad iyo jaantusyada ayaa muujinaya nooca xogta ee muuqaalkaas. Xitaa xogta adag waxay sahlan tahay in la fahmo marka la isku daro jaantus, sawir ama sawir.
Marka la eego barta casriga ah ee Dugsiyada Sare ee Dukumiintiga, ilo-wareedku wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro 15 milyan qof.
1 Maxay tahay sababta farsamada gacanta?
1.1 Faa’iido # 1- Soo-booqdayaasha
1.2 Faa’iido # 2 – Hesho Soo-booqdayaasha
1.3 Faa’iido # 3 – Ku dar Wakiil
2 Đồ họa thông tin Maxaa Ka Dhigaya Tốt?
2.1 Pháp sư Macluumaadka
2.2 Dữ liệu Macdanta
2.3 Bandhigga Warbixinta
3 Alaab Sawirida iyo Isticmaalidda Isticmaalka
4 Qalabka Hore ee Hagaha
4.1 1. ggPlot2 iyo R
4.3 3. Đồ thị JP
4.4 4. Bộ công cụ thông tin JS
4.5 5. Falanqaynta IBM (có loogu yaqaanay Indho badan)
4.6 6. Biểu đồ Google
5 Aaladaha Darawaliinta ee Aaladaha Bilawga ah
5.1 1. Chủ nghĩa
5.2 2. Goobta
5.3 3. Giá vẽ
5.6 6. Gultochart
6 Ka hor intaadan bilaabin: Baadhitaanka Infografiyaasha
7 Tusaalooyinka nolosha ee dhabta ah: Noocyada Infographic
7.1 Cabitaanada Cabbitaanka Sawirada
7.2 Hagaha Meelaha loogu Talagalay Wiilasha Fanaanka
7.3 Bia ngon nhất nước Mỹ 2008
7.4 Bixinta Kalkaaliyaha
7.5 Sự phát triển của điện thoại
7.6 Hubi Sawirka
Maxay tahay sababta farsamada gacanta?
Suuq geynta, Bell Pottinger, wuxuu arkay 55% kordhinta miisaaniyada ganacsiga loogu Talagalay walxaha dijitalka ah sida jaantusyada.
Trong lagu soo bandhigo macluumaad ku saabsan joornaalada, Iska daa wuxuu sheegayaa in tirada Dadka raadinaya macluumaadka xogtu ay arkeen inuu kordhay "800%" labadii sano ee la soo dhaafay. Istaatistikada sidan oo kale ah, cách adagtahay trong la diido trong muuqaalka muuqaalka xogta qaab infographics uu yahay macaamil wanaagsan / suuqgeynta bogagga iyo blogyada.
Faa’iido # 1- Soo-booqdayaasha
Ku darida jaangoyntu waxay dejinaysaa boggaga cusub ee soo booqda siyaabo dhowr ah.
Raadinta Webka: Isticmaalayaasha Internetka ayaa laga yaabaa inay sameynayaan cilmi-baaris ku saabsan mawduuca aad ku jirtid. Haddii aad tahay goobta kaliya ee aad haysatid faafin ku saabsan sababta quả việt quất ay kuugu sahlanaato, ka dibna waxaad ka helaysaa gaadiidka qof kasta oo raadinaya mawduan. Kuwa raadinaya gaar ahaan sawirrada ayaa laga yaabaa inay ku soo gudbaan infographic aad iyo sidoo kale.
Warbaahinta bulshada: Baadhitaanka Iskuullada Suuq-geynta Shakhsi ahaaneed oo muujinaya in ahaaneed oo soo booqato booqashada cusub ee warbaahinta bulshada waa mid aad u weyn.
Nhóm Nielson / Norman ayaa qiyaasaya trong booqashada celceliska bogga uu socdo muddo daqiiqad ah. Haddii aanad kantaroolin xiisaha akhristaha, waxay fiirin doontaa boggaaga oo aad u guurto bogga xiga.
Soo booqdayaasha boggaga waxay ku jiraan caado-jaridda wargelinta iyo wararka. Tani waa sabab kale oo ay jaangoyntu si fiican u shaqeeyaan si ay u qabtaan xiisaha akhristaha. Muuqaal muuqaal ah oo muujinaya xaqiiqo xiiso leh ayaa ah sida ugu dhakhsaha badan ee loo soo bandhigo macluumaadka ka badan cutubyada qoraalka. Akhriyeyaashu waxay sah Vikan karaan.
Caqabada farsamada ee adeega adeegga qaniisyada hodanka ah
Si kastaba ha ahaatee, arrin kale oo maskaxda lagu hayo waa in inta ay muuqato sawirada qiimaha, sawirada culus ee waqti dheer qaadaya inay u adeegaan inay marti galiyaan. Cilmi-baaris ay samaysay Pew Internet ayaa sheegaysa in celceliska goobta booqashadu uu filayo bog ah in ay ku soo galaan sadex ilbidhiqsi. Si deg deg ah goobta aad u socotaa, si aad u wanaagsan ayaa loo beddelayaa.
Waa ficil isku dheelitiran si loo hubiyo in goobtaada ay bixiso waayo-aragnimo hodan ah oo hodan ah iyada oo ay Weli sii socoto iftiin degdeg ah. Habka ugu fiican ee lagu dhameyn karo waa iyada oo la adeegsanayo soodhaweyn degdeg ah iyo sawirro la filayo. Waxaad ogaan doontaa annaga dib u eegista websaydhka, waxaan xoogga saari doonaa xawaaraha iyo inaan sameyno baaritaano badan oo xawaareyn ah markaan qiimeyno martigeliyaha.
Faa’iido # 2 – Hesho Soo-booqdayaasha
Tani waa ficil isu dheellitiran si loo hubiyo in goobtaada ay bixiso khibrad hodan ah oo muuqaal leh iyadoo ay wali u shidan tahay hillaac dhakhso leh. Sida ugu wanaagsan ee tan lagu dhammayn karo waa iyada oo la adeegsado deg degyo websaydhada martigelinta iyo sawirrada la hagaajiyay. Waxaad ogaan doontaa inaan si aad ah ugu xoojinay xawaaraha dib u eegistayada martigelinta – eeg Dib u eegida A2 tusaale ahaan ama hubi dib u eegistayada kale si loo.
Faa’iido # 3 – Ku dar Wakiil
50% maskaxdayada waxay ku lug leedahay howsha aragtida (Ilo).
Dadka intooda badani waa barayaal aragga. NeoMam ayaa cilmi baadhis ka samaysay ilaha sida Google Xu hướng, Nielson iyo Pearson oo soo jeedinaya 70 boqolkiiba.
Dadku waxay rumaysan yihiin waxa ay arkeen sababtoo ah cách fahmaan. Sameynta cilmi-baaris iyo ku-taageeridda boggaaga ayaa ku dari kara awooddaada astaantaada. Trung tâm inaad:
Sii tirakoob adag
Ku dar kheyraad ixtiraam leh oo hoos ku xusan
Ku dar garaafyada iyo jaantusyada muujiya tirakoobyada qaab muuqaal ah
Markaad isku darka aragtida muuqaala aku darka aragtida muuqaala aa aa aa aa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya na.
Maxaad u aragtaa sáp badan? Miyaad ku aragtay garaaf cad cad bogga ama midkale oo guurta, dámema ama laga yaabee inuu bilaabo video?
Đồ họa thông tin Maxaa Ka Dhigaya Tốt?
Horey u socoshada, waxaanu raadin doonaa qaar ka mid ah khayraadka iyo qalabka ugu wanaagsan ee waxqabadka xogta maanta. Sáp dumb ah maahan inaad tahay boogo caadi ah oo raba inuu abuuro qaar ka mid ah jilayaasha quruxda badan ee loogu Talagalay ujeedooyinka ujeedada ama Waan hubaa inaad ka heli doonto boostadan faa’iido leh.
Pháp sư Macluumaadka
Guud ahaan, cưa xẻ wanaagsan oo muuqaal ah wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo waaweyn:
Naqshadeynta macluumaadka saxda ah, iyo
Sawiro qurux badan.
Maskaxda ku hay trong inkastoo jaantusyada iyo jaantusyada ay u muuqdaan inay soo jiitaan dámenka blogsphere iyo isticmaalayaasha warbaahinta bulshada; waa inay sameeyaan wax ka badan kobcinta shakiga ah – Infographics iyo jaantusyada waxay u maleynayaan in ay keenaan xogta caajis iyo naxdinta leh hab fudud oo saaxiibtinimo ee.
Sidaa darteed, ka hor abuurista garaaf ama wax-qabad, waxaad u baahan doontaa 1) Abaabul, shaandheyn, iyo hannaanka xogtaada; 2) Go’aanso sida loo soo bandhigo xogtaada (hay còn gọi là naqshadaha naqshadaha xogta).
Dữ liệu Macdanta
Geli OpenRefine – Qalab macluumaad macquul ah oo waxtar leh oo naga keydisa in aan abaabulno xariiqteena macluumaadka oo aynu ku qorno Excel Worksheet. Hore ee loo yaqaan Google Refine (iyo Freebase Gridworks), qalabkani wuxuu ka caawiyaa Dadka isticmaala inay sahamiyaan oo nadiifiyaan xogta, is-beddelidda xogta hala.
Haddii aad la shaqeyneysid qaar ka mid ah xogaha aan kor ku soo sheegnay, OpenRefine waa hubaal waa trong ay haystaan ​​qalabkaaga. Một phần của tôi
Markaad diyaar u ahaato xogtaada, waa waqtigii la go Wayaansan lahaa sidaad ugu soo bandhigi laheyd daawadayaasha.
Waxaa jira habab aan tiro lahayn oo lagu sameyn karo tan: shaxda, jaantuska, garaafka xariiqda, histograms, khariidada kulaylka, shaxda socodka, miisaanka wakhtiga, iyo Mid kasta oo ka mid ah hababyadan waxay ku haboon yihiin noocyada xogta qaarkood (oo si xun u dhaqdhaqaaqa haddii si khalad ah loo isticmaalo).
Sidee u soo bandhigi kartaa xogtaada, si aad u tiraahdo statistic waa qurux, indho qabasho, iyo sahlan in la fahmo?
Arrintan, Qorista Sawirada waxay dhistay jadwal xilliyaysan oo aad u kala duwan oo ku saabsan dhammaan doorashooyinka aad isticmaali karto si aad u aragtid xogtaada (eeg hoos).
Xasuuso ở miisaanka wakhtiyadu uu soo bandhigo tiro tusaalooyin xiiso leh markaad u rogto jiirkaada, markaa hubi inaad u aragto miiska dhabta ah ee goobta.
Haddii aad raadineysay habab aan caadi ahayn, markaa waa inaad hubisaa maqaalkan cajiibka ah trên Tạp chí Maqaarka. Boostada ayaa la daabacaa wakhti ka hor laakiin Weli, waxaan u arkaa inay waxtar badan tahay.
Alaab Sawirida iyo Isticmaalidda Isticmaalka
Sida ugu dhaqsaha badan markii lagu dhammeeyo naqshadda dhismaha, waa waqtigii wax soo saar dhab ah. Ka sameynta shax muuqaal wanaagsan oo ka sameysan xogta ceeriin marna ma ahan howl sahlan, nasiib wanaag waxaa jira aalado tira badan oo shaqada lagu qabto.
Haa, tirooyin tiro aan tiradoodu ahayn oo loogu talogalay sawir-qaadidda. Waxaa jira qalab dhamaystiran oo soo saaraya garaafyada isdhexgalka oo ka baxsan xogta adag; waxaa jira sidoo kale codsiyada shabakada fudud ee aan waxba samayn karin, laakiin waxay abuurayaan garaafyada khadadka fudud ee 2 trục.
Sababta dhabta ah, waxaanu dooneynaa inaanu eegno labada dhinac isla markaana aan ku qorno qalabka garaafyada badan ee horay loo isticmaalo iyo kuwa isticmaala.
Qalabka Hore ee Hagaha
Marka hore, bal aynu eegno qaar ka mid ah alaabooyinka horay loo sii wado.
1. ggPlot2 iyo R
R waa luuqad kombuyuutar iyo jawi loogu Talagalay maareynta xogta, xisaabinta iyo muujinta muuqaalka. ggplot2, dhanka kale, waa nidaam sawir leh oo R ka caawiya soo saarida garaafyada muraayadaha badan ee adag. HeatMap kor, tusaale ahaan, waxaa la dhisay iyadoo la isticmaalayo ggplot2 iyo R.
Haddii aad xiiseyneyso barashada R iyo ggplot2, Baro barashada waa blog weyn oo loogu Talagalay akhrinta dheeraadka ah (inkastoo blogka aan la cusbooneysiinin muddo ah).
3. Đồ thị JP
JP Đồ thị waa aalad khaanadda PHP siêu dữ liệu oo taageera noocyada khiyaanooyinka kala duwan. Haddii ay dhacdo inaad qoreyso barnaamijka PHP ee u baahan jaantus abuurka maktabad, tani waa wax ay tahay inaad fiiriso. Ma dhihi lahaa JP Đồ thị waa aalad sahlan oo loogu Talagalay bilaicutasha laakiin aaladda (ama, maktabadda PHP) aad ayey kuu caawinaysaa markaad ubaahantahay inaad ka soo JP Đồ thị waa u bilaash isticmaalka aan ganacsiga ahayn waxaad u baahan tahay websaydh taageeraya PHP 4.3.x ama wixii ka sareeya.
4. Bộ công cụ thông tin JS
5. Falanqaynta IBM (có loogu yaqaanay Indho badan)
IBM Analytics waa qalab bilaash ah oo suurtageliya inuu isticmaalo si uu u abuuro waxyaalo ka soo baxa nooc kasta oo xog ah.
Waxay marti-galisay macaamiisha IBM, Indho badan ayaa ka badan wax-ka-fiirinta xogta – waxay u ogolaaneyaaaaaaaaa.
6. Biểu đồ Google
Google Biểu đồ waa bilaash, awood, dabacsanaan, waxaana lagu taageeraa qalab badan oo horumarineed.
Bảng xếp hạng Google trên trang web của chúng tôi có thể bán được trên bảng xếp hạng của Google. qalabku wuxuu ka caawiyaa samaynta jaantusyada qaabab kala duwan leh hoạt hình qurux badan iyo xakameyn là dhexgal.
Axiis waa qaab istiraatiijiyadeed oo muuqaal ah oo muuqaal ah oo ay sameeyeen Tom Gonzalez iyo Michael VanDaniker. Qalabka waxaa si gaar ah loogu Talagalay bilowga iyo khibradaha khibrad leh. Axiis wuxuu bixiyaa qaybaha horay u dhiska ee horay loo dhisay iyo sidoo kale qaababka qaabaynta qaababka iyo qaababka wax dhigista kuwaas oo kuu oggolaanaya.
Aaladaha Darawaliinta ee Aaladaha Bilawga ah
Sida cad, blogger badankood (naftayda la mid ah) uma baahnid qalab dhamaystiran oo wax ku ool ah oo ku saabsan hawlgalkooda caadiga ah ee viết blog. Inta badan, dhammaanba waxaan u baahannahay waa codsiga shabakada sahlan ama qalab sahlan si loo helo shaqo si dhakhso ah.
Iyadoo la sheegayo, halkan waa liiska qalabka abuurista oo u baahan dadaal wax-barasho oo aad u yar iyo user-ka saaxiibtinimo.
1. Chủ nghĩa
Visme waa mashruuc DIY ah kaas oo u oggolaanaya Dadka isticmaala inay soo bandhigaan bandhigyo xirfad iyo jaangoyn.
Trong ka badan shakhsiyaadka 350.000 iyo ururada (oo ay ku jiraan kuwa isticmaala shirkadaha waaweyn sida IBM iyo Disney) waxay isticmaalaan qalabka si ay ula xiriiraan si ka wanaags.
3. Giá vẽ
Easel.ly waxay ka caawisaa abuurista iyo wadaagida macluumaadka muuqaalka si sahlan onlineka. Barnaamijka webka wuxuu ku yimaadaa shabakad sahlan oo leh qaar ka mid ah qaababka hore iyo jadwalaha soo jiidashada. Inkasta oo Easel.ly ay wali tahay habka beta, hase yeeshee waxay horey u leedahay in ka badan 130.000 users-abuuray muuqaalada trên máy chủ ah.
Vizualize.me waxay kaa caawineysaa abuuritaanka macluumaad khafiif ah oo ku saabsan shaqsiyaadka (haa, halkan magaca Vizualize Me). Waa qalab xiiso leh oo lagu ag ciyaaro oo waxay ku abuuri kartaa sơ yếu lý lịch qurux badan ama astaan ​​muuqaal ah dhawr dhagsiyood gudahood. Haddii ay dhacdo inaad ku jirtid ‘LinkedIn’, waa inaad runtii isku daydaa tan – qalabku wuxuu awood u leeyahay inuu ku xiro boggaaga guud ee ‘LinkedIn’ wuxuuna abuuraa.
Ma u baahan tahay sameys-qore fudud? Kadibna Hohli waa meel lagu booqdo. Codsiyada websaydkani waxay taageertaa noocyada kala duwan ee jaantusyada laba iyo toban kala duwan oo kala duwan – dhammaan Dadka isticmaala waxay u baahan yihiin ina taga.
Gultochart waa qalab ku salaysan qaab-dhismeed oo ka caawinaya kuwa aan naqshadeeynin inay abuuraan muuqaalo qurux iyo jaantus.
Qalabka wuxuu taageersan yahay sifooyinka jiidista iyo soo-jiidashada waxayna bixisaa dooro ballaaran oo ku jira shaxdooyinka horay loo yaqaan, icones, vector. Haddii aad raadineysid qalab sahlan oo muujinaysa kharashka yar ee adeegga, Piktochart waa hubaal mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan.
Ka hor intaadan bilaabin: Baadhitaanka Infografiyaasha
Miyaad diyaar u tahay inaad abuurto qaar ka mid ah joornaaladaada gaarka ah? Sug Weli sáp badan ayaan haysanaa halkan.
Waa kuwan qaar ka mid ah joornaalada ugu caansan iyo jaantusyada laga soo qaaday internetka.
Waan hubaa trong aad aragtay qaar ka mid ah shabakadaha warbaahinta bulshada ee hore – taas oo caddaynaysa in sawirrada quruxda badan leh ulaha xogta macnaha leh!
Sidoo kale, waxaa jira sababo ay u soo galaan magaalooyinka farshaxanada si aad u culus maalmahaas.
Markaan tixraacno shaqooyinka Dadka kale, waxaan baran karnaa waxa sifiican ugu shaqeeya dhagaystayaasha.
Waa maxay cabbirka celceliska caansanaanta caanka ah?
Mawduucee noocee ah ayaa badanaa soo dhaweeyeen daawadayaasha?
Haddii aad ku darto xog badan intaad ku qorto jadwalkaaga?
Meeqo dhibcood oo qori ah oo aad ku dabooli kartid sawiradaada?
Waa maxay caansanaanta caansanaanta?
Tusaalooyinka nolosha ee dhabta ah: Noocyada Infographic
Kuwani waa su’aalaha lagu waydiiyo markaad fiirinaysid shaybaarka.
Cabitaanada Cabbitaanka Sawirada
Hagaha Meelaha loogu Talagalay Wiilasha Fanaanka
Nguồn: thế giới PC
Bia ngon nhất nước Mỹ 2008
Miisaska Wajiga ah ee Jajabka
Nguồn: Thời báo New York
Isha laga soo xigtay: Wow Wow Bây giờ
Waxaa laga soo xigtey: Quảng trường Afar
Waxaan ku baddalay daraasiin blogyo xiiso leh iyo trang web-yo la xiriira mawduucdayada markii aan sameynay cilmi-baariskan. Dhab ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo loo akhriyo oo sáp barto oo lala ciyaaro! Marnaba ma ogi inay jirto xog badan oo la heli karo si xor ah Gap Minder iyo Xaqiiqda Aduunka ee Fiican; Waxaan wax badan akhriyay boggaga internetka / blog sida UX Booth (ma aha mid gebi ahaan la xidhiidha Macluumaadka daadka; iyo waxaan si qoto dheer u bogayaa dhammaan shaqooyinka la yaabka leh ee lagu soo bandhigay Gudiga ‘Pinterest’ ee Pinterest iyo Biểu đồ khiêu dâm.
Haddii aad kaliya ka bilawdo muuqaalka xogta, waxaan aad uugu Talinaynaa inaad booqato goobaha iyo blogyada kor ku xusan.
Haddii aadan haysan awoodda xogta muuqaalka ee ololaha suuq-geyntaada, hadda waa wakhtigii la bilaabi lahaa.
Side loo sameeyaa Qoraallada quruxda badan iyo qaababka fayadhowrka ee goobahaaga?
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray tan iyo เวอร์ชั่น 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii
Najlepšie články 0
Sideo loo sameeyaa Qoraallada quruxda badan iyo qaababka fayadhowrka ee goobahaaga?
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray tan iyo verzia 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii.
Itinatampok na Mga Artikulo 0
Sidee loo sameeyaa Qoraallada quruxda katawan at qaababka fayadhowrka ee goobahaaga?
La qaboojiyay: _usort_terms_by_ID waa laga saaray tan iyo bersyon 4.7.0! Isticmaal wp_list_sort () halkii.
Contents0.1 "Này Jerry, sidee baan lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"0.2 Habka #
Sidee loo sameeyaa lacag dheeraad ah บล็อก: Fikradaha Niche & Istaraatiijiyada
Contents0.1 "เฮ้เจอร์รี่, ข้างบ้าน baag lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"0.2 Habka # 2:
Contents0.1 "Hola Jerry, sidee baan lacag kuugu sameeyn karaa lacagta sida adiga?"0.2 Habka #
Tumagal ng 5 He aha ang may kaugnayan sa Sim City at gamitin ang isang Pamamahala ng Kaihautū o pagkatapos ay
Ľahké digitálne sťahovanie vs WooCommerce – čo si vybrať a prečo?
7 mejores proveedores de alojamiento compartido baratos en 2020
Ang Pinakamahusay na Mga Serbisyo ng VPN ng 2020: 10 Nangungunang Mga VPN Inihambing
Resumen de chat de Twitter de WHSR: consejos para hackear el crecimiento del blog y ganar dinero
Comment écrire des descriptions de produits
2020’nin En İyi VPN Hizmetleri: 10 En İyi VPN Karşılaştırıldı
Prechod z Joomly na WordPress
Bạn có nên vô hiệu hóa Trackbacks và Pingbacks trên bài viết WordPress?
ʻO BlogVault’s Journey mai kahi Hobby Project vo Waiʻanae Loaʻa
วิธีการเพิ่มอัตราการแปลงเว็บไซต์: เคล็ดลับ Velox + กรณีศึกษา
Examen SEO de Shopify: en tête du classement du commerce électronique
Aling Serbisyo del boletín de correo electrónico es el mejor para su blog?
Tri oficiálne odporúčané hostingové spoločnosti WordPress – úvod videa
Како направити пословну веб страницу – Комплетан видео-водич по корак!
Entrevista de host web: CEO de WebHostFace, Valentin Sharlanov
Wix vs Weebly | 11 différences que vous devriez savoir en 2020 (graphique)
Najbolji jeftini เว็บโฮสติ้ง (ispod $ 5 / เดือน)
Vim: Uganda’daki Çocuklara Yardım Ederken Kodlayıcılar İçin Hayatı Kolaylaştırıyor
Яка послуга розсилки електронних листів найкраща для вашого блогу?
Pokrytý experiment: Požiadal som 28 hostingových spoločností o podporu živého chatu
SiteOrigin Page Builder Review: Cel mai bun plugin gratuit pentru constructorul de pagini WordPress?
9 meilleurs constructeurs de sites Web pour petites entreprises: lequel vous convient le mieux?
Suur kartell vs Shopify
โฮสติ้ง WordPress จัดการ Kinsta พยายามและทดสอบ – มันคือทั้งหมดที่ดีจริง ๆ ?
22 bezplatných materiálov, ktoré môžu blogeri použiť na výskum
Shopify หรือ WooCommerce – eCommerce ไหนดีกว่ากัน? (วิดีโอ YouTube)
Intervju s spletnim gostiteljem: Vprašanja in vodje SiteGround Tenko Nikolov
Limitahan ang Review ng Nilalaman Pro: Isang Advanced na Plugin ng Membership ng WordPress mula kay Pippin Williamson
Squarespace vs WordPress SEO: créez un site Web de haut niveau
En İyi Ucuz Web Hosting (5 $ / mo altında)
Paano Bumuo ng Mga Link sa Post-Penguin Era
Cómo configurar un boletín semanal automatizado impulsado por RSS en MailChimp
Buong Listahan ng Mga Tatak ng Hosting ng EIG (+ Rekomendasyon sa Non-EIG Hosting)
Touchscreen 2.0 – Die Zukunft mobiler Websites liegt im Responsive Design
Обзор WPMU DEV: что они предлагают и стоит ли присоединяться?
HostGator Review: Ist es das Richtige für Sie?
Hulyo para sa: Tlhahlobo at Phatlalatso at Phatlalatso at Live Chat, Lipuisano le Sucho
Virtual Pribadong Network (VPN): Isang Tunay na Detalyadong Gabay para sa Newbies
ʻO ka Notranji Scoop ma nā Pae Lāhui
Все о WPBeginner – и все, что он может предложить (подсказка: много!)
Ce să cauți într-o gazdă web WordPress (YouTube Video)
Ang serbisyo ng Choisir le meilleur d WordPress ng WordPress
Blog Okuyucularını Ücretli Müşterilere Dönüştürmek için 7 Taktik
Ali ste Joang Sebaka našli v WordPressu?